Waraaqaha dartiis ee loogu talagalay Android-kaaga oo ku jira xal sare HD la yaab leh | Androidsis
Waraaqaha dartiis ee loogu talagalay Android-kaaga oo ku jira xallinta sare leh HD cajiib ah
Waraaqaha dariiqa ayaa ah mid ka mid ah dariiqooyinka ugu fudud ee shaqsi ahaan looga dhigi karo terminaalkaaga wareega. Si kastaba ha noqotee, in kasta oo xaqiiqda ah in munaasabado badan aan soo daabacno qaar ka mid ah sawirrada ugu xiisaha badan maxaa yeelay waa arrimo socda ama waxay ku saleysan yihiin warar lagu sii daayo shaashadda yar, had iyo jeer ma helaysid noocyada kala duwan ee aad jeclaan lahayd isla goobta . Oo si hufan waxa aan maanta u soo jeedineyno waa inaan la qaadanno barnaamijkaaga 'Android' kaasoo ku siinaya waxaad rabto mar walba. Ayaa lagu magacaabay Waraaqo HD cajiib ah waxaana filayaa inaad jeclaan doontid.
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu wanaagsan ee codsigan uu bixiyo oo aad awoodid ku soo dejiso bilaash Google Play ayaa ah in lacagaha ay ku jiraan xal sare. Sidaa darteed, haddii aad tahay mid ka mid ah kuwa si uun u soo galay Photoshop si ay u geliyaan sawirro aad jeceshahay in cabbir ahaan loo habeeyay oo ay ku dhammaadeen pixelized ama tayo hooseeya, weligood waad ku sagootin kartaa farsamadan. Sida haddii waxaas oo dhammi aysan ku filnayn, mid kale oo ka mid ah sifooyinka ka dhigaya Cajiib HD Waraaqaha xiisaha leh ayaa ah xaqiiqda ah inay jiraan mowduucyo kaladuwan oo kala duwan oo lagu rakibo terminaalkaaga gacanta si fudud.
Haddii aad ka daashay inaad raadiso mar kasta oo aad rabto sawir-gacmeed shaqsiyeed oo kala duwan oo loogu talagalay terminal-kaaga Android, ma doonaysid inaad ka tanaasusho noocyada kala duwan, laakiin sidoo kale tayada sawirrada, waxaan u maleynayaa in soo degsashada barnaamijkan oo aad qaadanayso. had iyo jeer waxay noqon doontaa caawimaad weyn. Intaa waxaa sii dheer, mahadsanid liiska raadinta oo aad u macquul ah, waxaad awoodi doontaa inaad ka hesho wax walba oo aad u baahan tahay adoo adeegsanaya marin gaar ah oo ku saabsan qaybaha iyo qaybaha hoose. Maxaad leedahay, waad ku dhiiratay inaad raadiso asalkaaga wanaagsan maalin kasta?
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Waraaqaha dartiis ee loogu talagalay Android-kaaga oo ku jira xallinta sare leh HD cajiib ah
Sida loo rakibo Android-ka Windows-ka
Google ayaa kuu oggolaan doonta inaad ku abuurto astaantaada gaarka ah ciyaartoyga Google Play Games